ADSS fampiatoana clamp E8 natao ho fampiatoana fibre optic manodidina ADSS tariby na Mitete tariby tariby ao FTTX fanorenana. ADSS fampiatoana clamp E8 dia dielectric ka nampihatra ivelan'ny trano ao amin'ny lalana amin'ny lafiny <20, ary ny sakan'ny fohy hatramin'ny 100 mm.
Dielectric ADSS fampiatoana clamp dia tena mora ho an'ny fametrahana, ary tsy mitaky fitaovana fanampiny. Io karazana ADSS fampiatoana clamp antsika handily nanitsy manome fitoerana plastika fametrahana mamela tsotra amin'ny hazo fijaliana-sandry na ny fampiatoana fononteny mahitsizoro sy FTTH fihantonana, ihany koa.
Fampiatoana clamp E8 manana neoprene tanany ho an'ny tariby diameters MG 8-12 sy 12-16 mm, izay mandrakotra ny ankamaroan'ny tandavan-malaza ambony ADSS telegrama. Ny hasehonao manome ny tsara sy ny firaiketana amin'ny tariby antoka ny azo antoka fixation sy ny faharetany.
Fitaovana: UV mahatohitra thermoplastic, PVC.
ADSS fampiatoana clamp sy FTTH tariby Accessories misy na misaraka, na miaraka toy ny fivoriambe. Jera ny ADSS plastika fampiatoana clamps efa notsapaina sy voamarina mba hanomezana fahafaham-po ny fepetra takiana amin'ny mpanjifa.
Isika mifantoka amin'ny toetra isan-karazany sy feno tariby ADSS clamps, izay ahitana: ADSS fihenjanana clamp, hazo fijaliany-fitaovam-piadiana, fihenjanana sy ny fampiatoana fononteny mahitsizoro, famaranana vata, fibre optic splice fanidiana, sy ny fibre optic tariby Accessories.
Previous: Fibre Optic adaptatera SC
Manaraka: Drop Wire Clamp E2
ADSS fampiatoana clamp
ADSS fampiatoana clamps
Dielectric ADSS fampiatoana clamp